October 2010 ~ NPNGMyanmarP
5:08 PM NPNG(MyanmarP)
ဘဝမှာကုန်ဆုံးသွားပြီးရင် ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အရာသုံးခုရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ အချိန်၊ စကားလုံး၊ အခွင့်အရေး တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်မမြင်ကြပဲ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဖော်ထုတ်ကြရင် အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီး ဒီထက်မက တိုးတက်လာမှာပါ။ အမြင်လေးတစ်ခုပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံမကောင်းကြောင်းလို့ အမည်မတပ်ပဲ ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ အကြံပြုစာတွေ ရေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နောင်မှာကောင်းလာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ စတေးပြီး ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပဲ… မြင်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြကြရင် ဘယ်ဘက်ကမှ နားလည်မှု လွဲကြမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အခုရေးမည့် အကြောင်းအရာသည်လည်း ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ရပါ။ အခုလို တကူးတက ကျွန်တော့်စာတွေကို လာဖတ်ပေးနေတဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိကြောင်း အရင်ဦးဆုံး ပြောထားပါရစေ။
အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ် အမျိုးချစ်စိတ်ကိုတော့ အသိအမှတ် ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းထုတ်ကြမယ်။ မမေးပါနဲ့ မေးစရာမလိုတဲ့ အဖြေတွေကို ဖြေချင်နေခဲ့တာ အတော်ကြာနေပါပြီး။ “သူများခိုင်းမှ လုပ်တာ ကျွန်၊ သခင် ဖြစ်ချင်ရင် မိမိကိုယ်ကိုခိုင်း” ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်းပဲ။ အောက်ခြေမလွတ်စေနဲ့ ဘယ်အရာပဲလုပ်လုပ် ဘယ်စကားကိုပဲ ပြောပြော အရင်ဆုံးသေချာ စဉ်းစားပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဆရာတွေ ပြောခဲ့သလိုပဲ မိမိသည် ဘာကောင်လဲ…? ဘယ်နေရာရောက်နေလဲ…?? သိအောင်လုပ်ပါ။ လောကမှာ ပါးစပ်စည်းကမ်းမရှိပဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပြောနေတဲ့လူတွေသည် လူဖြစ်ပါလျှက်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဦးနှောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ လူ့တိရိစ္ဆာန်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သတ်လို့ လက်ရှိကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။ တရားဆိုဒ်တွေ ကုသိုလ်တရား လုပ်သူတွေမှအပ ကျန်အင်တာနက် စာမျက်နှာ ဘယ်နေရာကို ကြည့်ကြည့်၊ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် လူတော်တော်များများက အကောင်းမြင်တဲ့စိတ် နည်းပါးနေကြတယ်။ အဲဒါလေးတွေ လျှော့နိုင်ရင် လျှော့ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်အကျိုးကို တစ်ယောက်က သယ်ပိုးထမ်းဆောင်မဲ့ မေတ္တာမျိုးတွေ မရှိတဲ့အတွက် အနစ်နာလည်း မခံနိုင်ကြရှာဘူး။ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ထက် ကျော်သွားမှာကို မနာလိုကြဘူး။ သူ့ကိုကျော်မယ့် တစ်ယောက်အထက်မှာ လူပေါင်းမည်မျှ ရှိနေမည်ကို သတိထားမိမှာ မဟုတ်ချေ။ ဒီတစ်ယောက်ကိုတော့ ပေးမကျော်စေချင်တာ အမှန်ပင်တည်း။ အဲဒီစိတ်တွေ ပြင်နိုင်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ အရင်ကတော့ ပုခုံးဖက်ပေါင်းလို့ အဖုအထစ်လေးတွေ ဖြစ်လာရင် ဘယ်မျက်နှာမှ မထောက်တတ်ပဲ အကုန်ဖော်ကြတယ်။ ကိုယ်မကျေနပ်တော့ရင် သူဒုက္ခရောက်လည်း အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ကြပြန်ရော… ဘယ်မှာလဲ အကြင်နာတရား… အဲဒီလူတွေရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ လူမျိုး မြန်မာ ဆိုတာတွေပါပဲ။ အမည်ခံထားတဲ့ ဖုန်းတွေလိုပဲ။ ရောင်းချင်တိုင်းရောင်း နေကြတာလေ။ အမှန်တကယ်တော့ တန်ဖိုးရှိတာတွေကို မေ့နေကြတာ။ အဲဒါဟာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ နဲပါးကြလို့ပဲ။ သီလဆိုတာ ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီး ကောင်းတာကိုပြောရတာပါ။ သမာဓိက မကောင်းတာကို မတွေးနဲ့ စိတ်တွေကို ထိန်းထားနိုင်ရမယ်။ ပညာဆိုတာ အကြောင်းနဲ့အကျိုးကို စနစ်တကျသိတတ်ရမယ်။ ဒီသုံးလုံးပေါင်းလိုက်ရင် တစ်လုံးပဲ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဓမ္မ ဖြစ်တယ်လို့ သီတဂူဆရာတော်မှ ဟောကြားခဲ့လေသည်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ လူကြည့်တော့ ဘာအလုပ်မှမရှိဘူး။ ဒီမိုကရေစီကျတော့ ရချင်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီးဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး မီးခိုးတိတ် အလုပ်မလုပ်ပဲ ထမင်းစားလို့ရတယ် ထင်နေကြတာ။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အသုံးမကျဘူးလို့ လာပြောရင် မခံနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အဖြေကရှင်းပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမကောင်းမှတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲနေတဲ့ လူအကုန်ပါပြီးပေါ့ ဒါကြောင့် ပြောတဲ့လူလည်း အသုံးမကျတဲ့ စာရင်းဝင်သွားတယ်။ ဒါဆိုဘာလို့ မြန်မာနိုင်ငံ အသုံးမကျဘူးလို့ ပြောနေအုံးမှာလဲ… ငါတို့အသုံးမကျဘူးလို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ၀န်ခံလိုက်စမ်းပါ။ မ၀န်ခံရဲရင် မြန်မာနိုင်ငံ အသုံးမကျဘူးလို့ မပြောနဲ့ပေါ့။ ၀န်ခံနိုင်ရင်ပြောတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ လုပ်မှာလား မလုပ်ဘူးလား အေး…လုပ်ရဲရင် ခံရဲရတယ်… ကျွန်တော်တို့ အဘိုးကလက်မထိပ်ကို သံရိုက်သွင်းတဲ့ ဘုရင့်နောင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ၀န်ခံရဲတယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိတွေရှိတယ်။ ဒါမျိုးဝန်ခံလို့ ခေါင်းဖြတ်သတ်တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ၀န်ခံခြင်းဆိုလို့ တစ်ခုရှိသေးတယ်… ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဟောသလိုပြောရရင် ကလေးတွေဟာ အရမ်းဖြူစင်ကြပါတယ်။ ဒါကိုအရောင်ဆိုး ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ မုန့်တစ်ခုကို စားချင်လို့ ယူစားလိုက်တယ်။ ဒါကိုလူကြီးတစ်ယောက်က မေးမယ် ဒီပေါ်ကမုန့် ဘယ်သူစားတာလဲ… ကလေးကပြန်ဖြေတယ်။ သားသားစားလိုက်တာပါ… အဲဒီချိန်မှာ လူကြီးက…ရိုက်ပြီးတော့… စားချင်အုံးဟဲ့… ဆိုတော့ နောက်တစ်ခါ ကလေးကမှတ်သွားရော။ အမှန်တိုင်းပြောရင် ရိုက်ခံရတယ်။ ဒါကြောင့် လိမ်တတ်သွားတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီမုန့်က ဆွမ်းတော်ကပ်မလို့ စားလိုက်တော့ ငရဲကြီးတယ်။ သားကမသိလို့ စားလိုက်တာဆိုတော့ အပြစ်မရှိဘူး။ နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့များ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ပြောပြလိုက်ရင် အဲဒီကလေး တစ်သက်လုံး မှတ်သွားပြီး မိဘအရိပ်အောက်က လွတ်သွားလည်း အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာရမှာပါ။
ဒီလိုလူတွေ များလာလေလေ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ ခိုးမှုတွေနဲပါးလာမယ်၊ တခြားအကျင့်စာရိတ္တနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ရှားပါးလာရင် တိုးတက်ဖို့အတွက် အထောက်အကူတွေပဲ မဟုတ်လားဗျာ။ ပြင်သင့်တာလေးတွေလည်း ပြင်ကြပေါ့… လူငယ်တွေဆိုတာက နောင်တစ်ခေတ်အတွက် မျိုးဆက်ပဲလေဗျာ… အကျင့်စာရိတ္တကောင်းပြီး အရည်အချင်းရှိရှိနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် မသေသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေ သွင်းပေးဖို့ လိုအပ်လွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ ဒီလိုနေခဲ့ရတာ မကြိုက်ရင် နောင်တစ်ခေတ်မှာ ဒီထက်ကောင်းအောင် မိမိဘာလုပ်နိုင်သလဲ စဉ်းစားပါ။ လူအချင်းချင်း မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့… အဖွဲ့အချင်းချင်း မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ပဲ စေတနာလေးထားပါ။ အကောင်းတွေလုပ်ရင် အကျိုးတွေ ကောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒေါသနဲ့ပြောရင် ပူလောင်ပါမည်။ မေတ္တာဖြင့် ပြောရင် အေးချမ်းပါသည်။ ဘာနဲ့ပြောကြမလဲ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့။
သူ့အလုပ်ကိုယ့်အလုပ်ကို ထည့်တွက်ပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေဟာ ကိုယ်ဘက်ကနာမှာအရမ်း ကြောက်ကြတယ်။ သူတပါးနာချင်နာပါစေ ပြောတတ်တယ်၊ လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဒါနလောက်သာ ရက်ရောတယ်ဆိုတာကို ငြင်းပယ်ပြီး မေတ္တာတရားကြီးမားပုံကိုလည်း ပြသစေချင်တယ်။ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောနေခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြတ်နိုးတဲ့ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျောက်ပျက်သွားမှာ ဆိုးလို့ပြောနေရတာပါ။ ကျွန်တော့်အတွေးက သေးငယ်ချင် သေးငယ်ပါလိမ့်မယ်… နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးပေါ် ထားတဲ့ သစ္စာတရားကတော့ ပင်လယ်ကြီးလောက် ကျယ်တယ်ဆိုတာကို ပြောပါရစေ…
နိုင်ငံတော်က လူကြီးတွေသည်လည်း ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုပြီးတွေးမိမှာပါ။ သို့သော်လည်း အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာတောင် ကိုယ်စီပြဿနာတွေနဲ့ပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့တွေမှ ဒါတွေကို မဖော်ထုတ် မပြောဆိုခဲ့ရင် နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေက ထပ်ပြီးပြောနေအုံးမှာလဲ။ နောက်လူကို စောင့်ပြီး အလုပ်မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နောင်လာနောင်သားတွေ ပြောမယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ခေတ်နောက်ကျနေအုံးမယ်။ အဲလိုနဲ့ နောက်ကျနေခဲ့တာ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ အသက်တွေ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပဲ မဟုတ်လားဗျာ။ နိုင်ငံကောင်းအောင် ပြောတဲ့နေရာမှာ စိတ်ရင်းစေတနာ မှန်မှန်နဲ့ ပြောဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးချစ်တယ်ဆိုပြီး တစ်သက်လုံး တိုင်းတစ်ပါး လုပ်ကျွေးနေလို့ မရသလို၊ ပြည်တွင်းထဲမှာ အချိန်ရှိသရွေ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်အချိန်ဖြုန်း နေလို့လည်း မရပါဘူး။
ကျွန်တော့်မှာ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒါဟာ မြန်မာ့သမိုင်းကို ဖတ်လိုက်တိုင်း သမိုင်းစာမျက်နှာတွေ ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ ဂုဏ်ယူလောက်စရာတွေ အပြည့်ရှိပါလျှက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ ဘာလို့ဒီထက်မြင့်အောင် မလုပ်နိုင်သေးတာလဲ။ ခေတ်တွေလည်း ပြောင်းခဲ့တယ် စနစ်တွေလည်း သစ်လာတယ်။ လိုအပ်နေတာလေးတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အလျှား ပေ ၆၀ အနံ ပေ ၄၀ ကားဂိုဒေါင်တွေနဲ့ စမတ်ကျနေတဲ့ တိုက်အိမ်ခြံတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ ရုံးခန်းတွေမှာ စနစ်ကျကျ အခန်းတွေ ဖွဲ့ထားလိုက်တာ လူနေအိမ်တွေထက် သန့်လို့၊ ကွန်ပျုတာအခန်းတွေများ အဲယားကွန်တွေနဲ့ ရှယ်ဖြစ်နေလိုက်တာ၊ ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူလာဖြစ်ရတာ တန်တယ်လို့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။ မပြောင်းလဲနိုင်သေးတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ မြင်နေရတုန်းပါပဲ။ အတော်လေးကြာခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် အခုလည်း ဒီအတိုင်း ကျန်နေသေးပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို နောက်ပို့စ်တစ်ခုမှာ ရေးသားတင်ပြချင်ပါသေးသည်။ အားလုံးသော မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်ရေကို ချစ်ရင် အရာအားလုံးကို တန်ဖိုးထားကြပါလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်….